रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै धर्ना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै धर्ना
२०७० चैत्र १९, बुधबार ०३:१२ गते
भरतपुर । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवन शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गर्नु पर्ने माग राखेर मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ । दिउँसो एक घण्टा भएको धर्ना अवधिमा संकलित हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको छ ।
सोही माग राखेर समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले सोमबारदेखि काठमाडौँमा आमरण अनसन सुरू गरेका छन् । अनसनको दोस्रो दिन शान्ति समाजका ६४ वटा शाखाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना र हस्ताक्षर अभियान चलाएको समाजका चितवन जिल्ला सभापति राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
आमसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरूद्धको अपराधमा मुछिएकाहरुलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र निकाय हो अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत । सन् १९९८ मा इटालीको रोममा भएको भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधान पारित गरेको थियो । जसका कारण त्यसलाई रोम विधान भन्ने गरिएको हो ।
रोम विधानलाई कम्तीमा ६० देशले अनुमोदन गरेपछि फौजदारी अदालत गठन हने प्रावधान छ । जसका कारण ६० भन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेपछि नै विसं. २००२ को जुलाइमा नेदरल्यान्डको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको हो ।
देशमा हुने दण्डहीनता समाप्त पार्न विश्वका १२२ देशले सो विधान अनुमोदन गरेका छन् । तर नेपालले हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले विसं. २०६५ सालको माघ २३ मा रोम विधान अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगे पनि अनुमोदन गरेन । त्यसैले शान्ति समाजले अभियान सुरू गरेको समाजका चितवन सभापति राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
पुनस्र्थापित संसदको निर्देशन समेत पूरा भएन
राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाविरूद्ध चलेको आन्दोलन सफल भएपछि पुनस्र्थापना भएको तत्कालीन संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभाले समेत रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विसं. २०६३ साल साउन ९ गतेको संसद वैठकले सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई निर्देशन दिएको शान्ति समाजले जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्देशनपछि सरकारले ६३ सालको कात्तिक १ मा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले रोम विधान अनुमोदनपछि नेपाललाई सिर्जना हुने दायित्व र यसको असरका बारेमा अध्ययन गर्न जिम्मा लगाइयो । कार्यादलले नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको अदालतको भ्रमण गरेर सोही वर्षको मंसिर १५ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा दण्डहीनताको संस्कारलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न नेपाल रोम विधानको पक्ष हुनु आवश्यक भएको निश्कर्ष दिएको थियो । विधान अनुमोदन नगरे भविष्यमा मानवता विरूद्ध गम्भीर अपराधहरु हुन सक्ने भनेर कार्यदलले सतर्क गराएको छ ।
सरकारले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरीतका अपराध दोषीलाई कारबाही गर्न नचाहेमा वा नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले त्यस्ता अपराधिक घटनाको छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही समेत गर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल लगभग एक दशक सशस्त्र संघर्षको कालखण्डबाट गुज्रिएकाले रोम विधानको अनुमोदनलाई मानव अधिकारकर्मीहरुले अपरिहार्य ठहराएका छन् । सशस्त्र युद्धकालका घटनामा मुछिने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि रोम विधान अनुमोदन गर्न हिचकिचाएको अनुमान मानव अधिकारकर्मीहरुको रहेको छ ।
‘रोम विधान अनुमोदन गरेपछि भएका घटनामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले छानविन र कारबाही गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले पहिलेका घटनामा के होला भनेर सोच बिचार गर्न आवश्यक छैन । यो विधान यथाशीघ्र अनुमोदन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ’ शान्ति समाज चितवन शाखाका सभापति पौडेलले भने ।
समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री तथा सरकारका सबै मन्त्रीहरुलाई पत्र लेखेर चैत्र १५ भित्र रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका थिए । सो मितिभित्र सरकारले विधान अनुमोदन नगरेपछि पहाडी आमरण अनसनमा बसेका हुन् । समाजको शाखा रहेका जिल्लाहरुमा पनि अभियान सुरू भएको हो ।